Into esinokuyenza ngeTouch Bar kwinkqubo ye-Evernote | Ndisuka mac
Isicelo se-Evernote sithathe indawo entle ngokubhekisele kwimisebenzi abayifakileyo kulo 2017. Ngexesha lika-2016 lifune ukwenza ingeniso ngomsebenzi owenziweyo kule minyaka idlulileyo, kusenziwa iinguqulelo ezihlawulelweyo, hayi kuphela amandla okusebenzisa, kodwa nemisebenzi abayenzayo. Bakhawuleze kakhulu kangangokuba izicelo zabo bakhuphisana nazo ziye zanciphisa inzuzo ababenayo. Endaweni yokuba i-2017 iqale ngcono kakhulu, kwaye enye yezona zinto zintsha zisetyenziswayo kubasebenzisi beMac ibe yile ukwamkelwa kwemisebenzi ngeTouch Bar. Ukungena kulo mbandela, masibone ukuba i-Bar Bar isizisela ntoni kwisiqhelo sethu no-Evernote.
Xa sifikelela ku-Evernote kungenxa yezizathu ezibini. Jonga ulwazi ebesilwenzile ngaphambili okanye umsebenzisi abelane nathi ngalo, okanye wenze ulwazi oluza kusetyenziswa kamva. Le misebenzi mibini isisiseko iyafumaneka kwi Ibha yeBar, Kufuneka nje ucofe yenza inqaku okanye kwi ukukhulisa iglasi ukufaka ulwazi esilukhangela ngekhibhodi.
Elinye lamanqaku awomeleleyo endiwaqaqambisayo kuyo nayiphi na inkqubo egcina ulwazi, nokuba kungumbhalo, imifanekiso, umculo okanye iifayile, yi Ukusetyenziswa kweelebheli. Oku kusivumela ukuba sifumane ulwazi olufanayo ngokusebenzisa imitya emibini yokukhangela. Iingcebiso zeleyibhile yamanqaku ethu ngoku ziya kuvela kwi-Bar Bar. Zicwangciswe ngokwe-alfabhethi, ke ukuba awuyifumani ileyibhile, kuya kufuneka ucinezele kwaye uhambise umnwe wakho ukusuka ekhohlo ukuya ekunene ude ufumane oyifunayo.
Gqamisa iindawo ezibalulekileyo yomyalezo kubalulekile. Ubuncinane yile ndlela abacinga ngayo abaphuhlisi be-Evernote. Ke ngoko, icandelo eliphindaphindayo litshintsha umbala wesivakalisi okanye umhlathi. Kufuneka uhambise umnwe wakho kwibar yombala ukuze ufumane umbala ofanelekileyo.
Kwaye okokugqibela, uEvernote une isichazi. Ikuvumela ukuba uphawule imifanekiso okanye inqaku elipheleleyo ngeentolo, iibhokisi, amagqabantshintshi okanye isicatshulwa esibhaliweyo. Olu khetho lukhona nanini na xa sifuna ukuhlela isichaso.
Ibha yokuChukumisa yenzelwe ngokudibeneyo ukugcina umsebenzi kwizicelo zolawulo lwemihla ngemihla ezinje nge-Evernote. Siyathemba ukuba abaphuhlisi baya kuyila imibono yabo ukuze bafumane amanqaku amatsha kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Into esinokuyenza ngeTouch Bar kwinkqubo ye-Evernote
Kunqande ukukrwela kumphezulu weSiri Remote ngezi vinyl